အမေဇုံရောင်းအားနှင့်အတူ $ 48 တစ်ရက်အဘို့သင့်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုများအတွက်လျှောက်လွှာများနှင့်အသံဖြင့်ထိန်းချုပ် Add - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ "အမေဇုံရောင်းအားနှင့်အတူ $ 48 တစ်ရက်အဘို့သင့်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုများအတွက်လျှောက်လွှာများနှင့်အသံဖြင့်ထိန်းချုပ် Add - BGR
အမေဇုံရောင်းအားနှင့်အတူ $ 48 တစ်ရက်အဘို့သင့်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုများအတွက်လျှောက်လွှာများနှင့်အသံဖြင့်ထိန်းချုပ် Add - BGR
အဆိုပါစမတ်အိမ်ပြန်ဘို့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအလွန်အေးမြသောဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်အချို့ဆက်ဆက်အခြားသူများထက်ပိုမိုအသုံးဝင်ဖြစ်ကြသည်။ သင်အမှန်တကယ်ဧရာထိတွေ့မျက်နှာပြင်နဲ့စမတ်ရေခဲသေတ္တာလိုအပ်ပါသလား? ကျနော်တို့ဒါသေချာမသိပါပဲ ... ဒါပေမယ့်အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့သညျကိုပြသရန်နှင့် ပတ်သက်. သောစမတ် gadget ကကိုချစ်လိမ့်မယ်သေချာပါသည်။ အမေဇုံကိုသာကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖောက်တံပေါ်တနေ့များအတွက်သတ်ဖြတ်ရောင်းချခြင်းရရှိထားသူ စမတ် Meross ။ ဒါဟာတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, ဤ application တစ်ခုထိန်းချုပ်မှုနှင့်သင့်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုမှပင်အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ကထပ်ပြောသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကားဂိုဒေါင်ဖွင့်လှစ်ရန် Alexa သို့မဟုတ် Google လက်ထောက်ပြောပြနိုင်, လက်ျာဘက်ပဲ! ဒါဟာပုံမှန်အား $ 73 များအတွက်ရောင်းချပေမယ့် $ 47,99 များအတွက်ရောင်းချမှုအပေါ်ကြာသပတေးနေ့ပါပဲ။ လုံးဝကစစ်ဆေး!
စမတ် Be: သင်၏လက်ရှိကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုနှင့်အတူစမတ်ခြင်းရှိကြလော့။ ရိုးရှင်းစွာဘယ်နေရာမှာမဆို meross / 'mɪrɚs / app ကိုနှိပ်သို့မဟုတ်သင့် Alexa သို့မဟုတ် Google ထုတ်ကုန်စကားပြောနေဖြင့် remote control နဲ့အသံထိန်းချုပ်မှု။ သငျသညျအိမ်မှာချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်မအနေဖြင့်သင့်မိသားစုထားခဲ့ဖို့, သင့်ဧည့်သည်များသို့မဟုတ်သင်၏သံတမန်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖြတ်သန်း။ လစဉ်ကြေးများသို့မဟုတ်အခြား subscription ကိုအခကြေးငွေမရှိပါ! နှိမ့်ချ scroll နှင့် "နည်းပညာပိုင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်" စစ်ဆေးပါအသံဖြင့်ထိန်းချုပ်၏နောက်ဆုံးအသုံးပြုရန်။
compatibility စစ်ဆေးမှု: Scroll နှင့်စစ်ဆေး - သင့်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို၏မော်ဒယ်ဆဲလျှင်ကြည့်ရှုရန် "နည်းပညာပိုင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်လျှောက်လွှာလမ်းညွှန်" ။ compatibility စာရင်း။ သို့မဟုတ် meross / 'mɪrɚs / အရာရှိတဦးကို web ပေါ် Compatibility ကိုစာရင်းစစ်ဆေးပါ။ က "တိုတိုစမ်းသပ်လေယာဉ်မှူး" ပျက်ကွက်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ဖောက်တံဂိုဒေါင် Chamberlain / LiftMaster / လက်သမားကနေလာပါတယ်။ အကယ်. ကျနော်တို့လည်ပတ်, အ MSG100 နှင့်သင့်အဘို့သင့်လျော်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းတင်ပို့နိုင်ပြီး, ကျွန်တော်တို့ကိုဖောက်တံကားဂိုဒေါင်အပေါ်သင်ယူမှုခလုတ်ကို၏အရောင်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မျိုးစုံအကြောင်းကြားစာသည် Modes: ထိုကဲ့သို့သောကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုပိတ်လိုက်ရန်သင့်အားသတိပေးအချိန်ပိုနှင့်ညဉ့်အကြောင်းကြားစာများဖွင့်လှစ် / ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုပိတ်ပြီးအကြောင်းကြားစာ၏ပြည်နယ်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသော Modes သာနေဖြင့်တပ်လှန့်အကြောင်းကြားစာနေပါ။ သင် APP ကနေတစ်ဆင့်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုပိတ်ပြီး / ဖွင့်လှစ်လည်ပတ်မှတ်တမ်းများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ပိုမိုတိကျနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့: ကကားဂိုဒေါင်တံခါးပြည်နယ်နှင့် signal ကိုတည်ငြိမ်ဖို့ပိုပြီးတိကျစွာစောင့်ကြည့်တဲ့ High-sensitivity ကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူပေးအပ်သည်။ 110V 5V, အများကြီးပိုလုံခြုံပြောင်းတစ်ခု adapter နဲ့။
BGR - အမေဇုံ, ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်လက်ငင်း Pot $ 4, $ 27, 10 $ Anker charger ကိုနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖို့ကြိုးမဲ့နားကြပ်ပေါ်အခမဲ့ပိုက်ဆံ
ဒီအထူးကူပွန်နှင့်အတူ $ 200 မှကင်မရာကို double dash 140 Get - BGR
အိန္ဒိယ: တရားရုံးချုပ်က Ayodhya ကိစ္စတွင်၏အဆုံးနေ့စွဲမေးတယ် | အိန္ဒိယသတင်း